डा. केसीको अनशन, नतिजा शून्य ! परिक्षामा ७६ प्रतिशत डाक्टर फेल | Chitwan Online Khabar
डा. केसीको अनशन, नतिजा शून्य ! परिक्षामा ७६ प्रतिशत डाक्टर फेल
Posted By: chitwan online khabaron: August 13, 2018 In: पत्रपत्रिका, मुख्य खबर, राष्ट्रिय, शिक्षा
काठमाडौँ,२८ साउन । ठानिन्छ–डाक्टरहरू पढाइमा तगडा हुन्छन्। तर, लाखौं तिरेर पढेका तिनै डाक्टरमध्ये ‘लाइसेन्स’ परीक्षामा ७६ प्रतिशत फेल भएका छन्। तिनले चिकित्सासम्बन्धी काम गर्न पाउने छैनन्। डा. गोविन्द केसी चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरलाई लिएर पटक–पटक आमरण अनशन बस्छन्। एमबीबीएस पास गरेका विद्यार्थीको हालतले त्यसलाई चरितार्थ गरेको छ ।
यसअघिका परीक्षामा समेत असफल भएका विद्यार्थीको संख्या धेरै भएकाले अनुत्तीर्ण भएको काउन्सिल पदाधिकारी बताउँछन्। ‘यस्तो नतिजा आउनुमा पढाउने शिक्षक, कलेजको वातावरणलगायत विभिन्न पक्ष जिम्मेवार छन’, डा। अधिकारीले भने। उनले वर्षभरि तीनपटकको उत्तीर्ण औसतदर ६० देखि ७० प्रतिशत हुने गरेको खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।
त्यस्तै ब्याचलर इन डेन्टल (बीडीएस) तर्फको नतिजा औसत रहेको छ। काउन्सिल प्रवक्ता डा. अधिकारीले एमबीबीएसभन्दा बीडीएस परीक्षा तुलनात्मक राम्रो भएको जानकारी दिए।
बीडीएसमा ५७ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन्। बीडीएसमा १ सय २७ जनाले चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्रका लागि परीक्षा दिएकामा ७३ जना उत्तीर्ण
साभार: मकालु खवर
सभापति देउवाविरुद्ध हस्ताक्षरको चेतावनी